poster poster ivelany China Manufacturer
Shenzhen Priva Tech Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Worldwide mpanondrana:71% - 80% Certs:ISO14001, CE, EMC, RoHS, UL Description:Vidin'ny billboard elektronika,Ny Billboard Cost,Notaterina Billboard amidy
Home > Products > Led Kiosk Poster > Famoahana vita amin&#39;ny gorodona ivelany > poster poster ivelany
Inona no haben'ny fampisehoana elektronika ivelany
Ny fampirantiana LED ivelany dia matetika ampiasaina manokana: P10, P12, P14, P16, P20 semi-ivelany LED fampisehoana. Ny fampisehoana LED ivelany dia mety ho an'ny toerana ivelany, toy ny: kianja, kianja, trano fananganana rindrina ivelany, tsanganana fanaovana dokambarotra, làlan-dàlambe, fiantsonana, gara, seranam-piaramanidina ary toerana hafa any ivelany. Loko tokana anatiny sy avo roa heny nitarika fampisehoana matetika ampiasaina: 5.0, 3.75, 3.0.
Mpanodina fanidiana ao anatiny, plug-in hampiasaina; Samy gorodona mitsangana sy finday misy, Easy hitaterana & hametraka.
Ny fanaraha-maso manan-tsaina sy GPS dia manampy amin'ny fiarovana ny fampisehoana amin'ny famotehana sy fitantanana ireo kirany fampisehoana rehefa lehibe ny habetsahany.
Vidin'ny billboard elektronika
Ny Billboard Cost
Notaterina Billboard amidy
Ny vidin'ny efijery mitarika
Vidiny eo amin'ny efijery ivelany